ट्याटु भन्दा तल हेर्यो भने अफ्ठ्यारो लाग्छ – नायिका शशि खडका | Glamour Nepal
Home » कुराकानी » ट्याटु भन्दा तल हेर्यो भने अफ्ठ्यारो लाग्छ – नायिका शशि खडका
ट्याटु भन्दा तल हेर्यो भने अफ्ठ्यारो लाग्छ – नायिका शशि खडका
“थोरै भए पुगी सरी” टेली चलचित्रमा बाल कलाकारको रोलबाट अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरेकी नायिका, नृत्याङ्गना एबं मोडल शशी खड्काले चलचित्र “पलपलमा” बाट नायिकाको रुपमा नेपाली सिनेमामा डेब्यु गरेकी हुन् । पछिल्लो चलचित्र “किन किन” मा अहिलेसम्मकै सेक्सी रोल निर्वाह गरेकी शशीले छातीमा पुतलीको ट्याटु खोपाएकी छिन् । इन्टरटेन्मेन्ट वेब साइटहरुमा मात्र होइन्, अखवारका कला पेजहरुमा छातीमा पुतली उडेको ट्याटू देखियेका उनको तस्बीर निकै प्रकाशित भईरहेको छ ।
सिने बजारमा तपाईले छातीमा खोपाएको ट्याटुको निकै चर्चा छ । यहि चर्चा बटुल्नको लागी ट्याटु खोपाएको हो ?
कहाँ त्यस्तो हुनु नि ? चर्चा हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए गालामा खोपेर आउंथे , किन छातीमा खोप्थें र ? खासमा भन्ने हो भने मैले प्लान बनाएर ट्याटु बनाएको होइन् । एकदिन दिदीको ट्याटु हान्न र मेरो ओठ छेडन ट्याटु सप गएका थियौं । तर त्यहाँको मान्छेले ‘ओठ नछेड बरु ट्याटु हान्’ भन्नुभयो । मलाई पनि राम्रै हुन्छजस्तो लाग्यो र अचानक ट्याटु हानियो । मेन्ट्ल्ली प्रिपिएर भएर हानेको होइन् ।
चर्चा पाउनको लागी नभए अन्य अंग पनि थिए, किन छाती मै हानेको ?
मैले भनिसके नि, चर्चा पाउनको लागी गरेको भए पो सोच विचार गरेर गर्थे, त्यो त रहरले हानेको हो । फेरी छाती मै हान्नुको कारणचाहि के हो भने, जाडो महिना थियो । कता हान्ने, कता ? म पनि अन्योलमा परें । दिदीले खुट्टामा हान् भन्नुभयो । ट्याटु सपको मान्छेले ‘ढाड वा नाइटोभन्दा थोरै तल हान्’ भन्नुभयो तर मलाई त्यति राम्रो लागेन । कहाँ हान्ने भन्दाभन्दै त्योबेला मैले अगाडी अलि ‘ओपन’ ड्रेस लगाएको थिए“, त्यहि भएर छातीमै हानियो ।
केही समय अगाडी करिष्मा मानन्धरले छातीको ‘त्यहि एरिया’मा ट्याटु खोपाएर धेरैको ध्यान खिचेकी थिइन् । यसरी हेर्दा त तपाईले पनि करिष्माकै सिको गरेको देखियो नि ?
त्यस्तो होइन् । मैले उहाँको सिको गर्ने भए त अभिनय, ट्यालेन्टको पो गर्थे । ट्याटुको सिको गरेर के फाइदा हुन्छ र ?
केटीहरुको संवेदनशिल अंगमध्ये छाती पनि पर्छ । तर तपाईले त्यहि ट्याटु हान्नुभयो । अफ्ठ्यारो लागेन् ?
म तपाईलाई अलि ‘क्लिएर’ गर्न चाहान्छु, छातीमै भनेर मैले ‘ब्रेस्ट’मा खोपाएको छैन् । ब्रेस्टभन्दा धेरै माथि छ । त्यसैले अफ्ठ्यारो लाग्ने कुनै भएन् ।
पुतलीकै ट्याटु खोपाउनुको अर्थ ?
पुतली ‘फ्रिडम’को पर्याय हो । उ उडेर स्वतन्त्रतामै बाचिरहेको हुन्छ । कसैको डरबिना आत्मसम्मानको साथ डुलिरहेको हुन्छ । पुतलीको त्यही विशेषताले मलाई तान्यो ।
कतिपय मान्छेले शशीले त्यहाँभन्दा तलतिर पनि ट्याटु खोपाउदै जान्छे भनेर भविष्यवाणी गरेका छन् । यो भविष्यावाणी पुरा हुने सम्भावना कतिको छ ?
नेभर, नेभर । जसले भन्नुभयो, त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो । म सम्मान पनि गर्छु । मोडल भएको नाताले पेटमा केही नेभी गर्नसक्छु तर ट्याटुचाहि त्योभन्दा तल बनाउदिन । तपाई ढुक्क हुनुस्, म समाजमा पच्ने काम मात्र गर्छु ।
भनेपछि एउटी नेपाली चेलीले छातीमा ट्याटु हानेको समाजमा पच्छ ?
हन्ड्रेड पर्सेन्ट पच्छ । इट्स नर्मल ।
साच्चै ट्याटुप्रति परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
मेरो ममी साथीजस्तै हुनुहुन्छ । हामीसंगै बसेर फेसन च्यानलहरु हेर्नुहुन्छ । मैले फोन गरेर ‘ममी म छातीमा ट्याटु बनाउछु’ भनेको थिए“ । त्यो बेला ‘नाई’ भन्नुभएको थियो । तर पछि ‘तिमीलाई राम्रँे लाग्छ, गाह्रो हुँदैन भने बनाउ भन्नुभयो । त्यसैले परिवारबाट त त्यस्तो कुनै समश्या छैन् ।
भोलीका दिनमा अन्य अगंमा पनि ट्याटु हान्ने प्लान छ ?
म कालभैरव भगवानलाई एकदमै मान्छु । त्यसैले केही समयपछि हातमा कालभैरवको ट्याटु खोपाउछु होला ।
ट्याटु हाने पछि तपाईको ‘सेक्सी लुक्स’ अझ हाई भएको फिल गर्नुभएको छ ?
म आफूलाई नै त त्यस्तो लाग्दैन् तर ट्याटु खोपाएपछि मैले जति पनि फोटोसुट गरें । त्यसबाटचाहि राम्रो फिडब्याक पाएँ । कति मान्छेहरुले त ‘ओ..शशीको पनि ट्याटु रैछ, छातीमा पुतली कति सुहाएको’ भन्नु भयो । कतिलेचाहि अझ तल हानेको भए राम्रो हुन्थ्यो पनि भन्नुभयो । त्यसैले म आफूलाईचाहि सेक्सी देखिएकोभन्दा पनि सुहाएकोचाहि छ जस्तो लाग्छ ।
यसको मतलब ट्याटु नखोपाउनु पर्ने रहेछ भनेर ‘रिर्गेट’ भएको छैन् ?
नो, नो । मलाई त निकै खुशी लागीरहेको छ । बरु त्यो ट्याटु अलि बसिरहेको छैन्, त्यसैले अलि गाढा बनाउदैछु । फेरी मेरो दिदीकै चारपाँच ठाउँमा ट्याटु भएकोले पनि मलाई कुनै अफ्ठयारो नलागेको हुनसक्छ ।
केटाले कुन ठाउँमा ट्याटु खोपाएको मन पर्छ ?
ट्याटु खोपाएका केटाहरु मलाई स्मार्ट लाग्छ । त्यसमाथि घाँटीको पछाडी बिच्छीको ट्याटु बनाएको त झन धेरै मन पर्छ ।
अन्त्यमा, एउटा रमाइलो प्रश्न, कसैले तपाईको ट्याटुमा एकोहोरो हेरिरह्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
अफकोर्स ट्याटुमा हेर्दा त राम्रो लाग्छ, तर त्योभन्दा तल हेर्यो भनेचाहि अफ्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले उठेर हिड्छु ।
बेडसिन विशुद्ध कलाकारका रूपमा गरिएको अभिनय मात्र हो – नायिका सुष्मा कार्की
मन पराउने हजार छन्, जुनी काट्ने भेटेको छैन- गायिका सुनिता दुलाल
बल्ल आयो अभिनेत्री शशीको बुद्धि !
उत्तेजक भूमिकापछि किनारा लागेका हिरोइनहरु
कता हराईन किन किन हट नायिका शशि ?